Palo Alto Apple Store iji mechie Mmezi Ihuhu Ihu | Esi m mac
Apple na-emechi ụlọ ahịa kachasị mma California, La Palo Alto Storelọ Ahịa Apple. N'ụzọ doro anya, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya akwadoghị imeghe nke a n'ihi na o doghị anya mgbe mmebi nke ndị ohi wakporo ya na Disemba gara aga na nke a na-amatabeghị ndị omekome a. Storelọ ahịa a atawo ahụhụ ọtụtụ ohi na akụkọ ntolite ya, mana onweghi nke yiri nke Disemba gara aga ebe ndị ohi jisiri ike kụrisịa ihe nchebe ndị dị n’ihu, na mgbe ahụ windo ụlọ ahịa ahụ.
Na 2012, ha zuru ohi na ụlọ ahịa a, mana oge a ha enweela nnukwu mbibi n'ihu ụlọ ahịa ahụ na ọ chọrọ obere ọrụ raara onwe ya nye, yabụ Thelọ ahịa ahụ mechiri ọnụ ụzọ ya na Sọnde gara aga, Jenụwarị 15, ruo mgbe ọ rụchara mmebi ahụ kpatara. Na mgbakwunye na mmebi kpatara n'ọnụ ụzọ na windo nke ụlọ ahịa na ngwaọrụ ndị ezuru ohi, nnukwu mbibi akụ na ụba ga-akpata site na mmechi nke ụlọ ahịa a na-anabata ọtụtụ puku ndị ọbịa.
Anyị ekwenyeghị na ha ga-ewe ogologo oge iji meghee ụlọ ahịa Palo Alto a ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ na ya imepe ya ozugbo enwere ike. Apple na-abụkarị ndị enyi ndị ọzọ na-achọkarị na nke a bụ n'ihi na ngwaahịa ha dị oke ọnụ ma na "ahịa aka nke abụọ" enwere ike ree ya n'ụzọ dị mfe, mana ekwesịrị iburu n'uche na ha niile na-ebu akara akara na ha nwere ike ịdebe nsuso site na ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Palo Alto Apple Store iji mechie mmebi fa closeade